Moa ve manaraka ny fomba fanao tsara indrindra ireo ny momba anao anay? | Martech Zone
Moa ve manaraka ny fomba fanao tsara indrindra ireo ny momba anao anay?
Alakamisy, Aogositra 31, 2017 Alarobia 30, 2017 Douglas Karr
An Momba anay Ny pejy dia iray amin'ireo pejy voatanisa amin'ny lisitra fizahana tranonkala rehetra. Pejy misy fitsikerana kokoa noho ny omen'ny orinasa azy io. Tsara Momba anay pejy dia matetika zahan'ny mpiasa ho avy sy ny mpanjifa hahafantatra bebe kokoa momba ireo olona ao ambadiky ny orinasa iray. Adinontsika matetika fa tsy ny fiasa sy ny tombontsoa fotsiny no tadiavin'ny vinavina - te hanana fahatokisana izy ireo fa hiara-hiasa amin'ireo olona atokisany izy ireo ary tsy hanenina!
Ny fahatokiana sy ny fanajana dia zavatra tsy maintsy azo. Ny fahatsiarovan-tena dia avy amin'ny hoe tampon'ny saina. Ireo rehetra ireo dia tokony ho tanjona farany amin'ny paikadin'ny varotrao, manomboka amin'ny SEO sy marketing amin'ny atiny ka hatramin'ny media sosialy sy mailaka. Ny pejy About Us an'ny orinasanao dia fotoana iray hafa hilazana tantara izay hanampy anao hifikitra ao an-tsain'ny mpanjifanao. (Ary toy ny Blue Acorn's manaporofo ny fandinihana, io koa dia fotoana azo amidy.) Vincent Nero, Senior Content Marketing Specialist
Ny Siege Media dia nandinika izay itovizany amin'ireo pejy momba anay Mahomby be, ary nametraka lahatsoratra epiko naseho Ohatra 50 momba ny aingam-panahy momba anay. Novokarin'izy ireo ity sary tsara tarehy ity izay mampiseho fomba fanao 11 tsara indrindra arahana rehefa manamboatra ny anao ianao:
Value Tolo-kevitra amin'ny - apetraho eo ambonin'ilay vala ny volavolan-kevitry ny sanda misy anao izay 80% -n'ny fotoanany ny mpampiasa.
soa - aleon'ny mpanjifa mamaky momba ny tombony tsara fa tsy manimba.
Miteraka fihetseham-po - ny fanantenanao dia ho 2 na 3 heny mety hirotsaka amin'ny tantara mampihetsi-po hitaona azy ireo.
Video - aleon'ny ankamaroan'ny mpanapa-kevitra mijery video fa tsy mamaky ny lahatsoratra amin'ny pejy.
mpanorina - ampidiro ny sary fantatry ny mpanorina ny orinasanao, hampitombo ny fiovam-po 35% izany!
Photos - Mandany fotoana 10% kokoa ny mpanjifa mijery sary noho ny famakiana lahatsoratra amin'ny pejy iray. Mialà sasatra ho an'ny tifitra matihanina sasany!
Tsy misy sary stock - Ny sary stock dia tsy bla fotsiny… fa tena lakilen'ny tsy fahatokisana orinasa iray.
Testimonials - Mampitombo ny 34% ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mpanjifa!
Hevitra tsara - 72% ny olona milaza fa ny fijerena tsara dia mahatonga azy ireo hatoky orinasa bebe kokoa.
Miantsoa hanao asa - inona no tianao hataon'ny mpitsidika rehefa avy mijery ny pejinao izy ireo? Fivadihan-telo heny amin'ny fanampiana CTA!
Contact Info - 51% amin'ny olona no mieritreritra fa ny fampahalalana feno dia ny singa fampahalalana tena lehibe tsy hita ao amin'ny tranonkala. (Tianay ny mametraka azy io amin'ny tongotra isaky ny pejy!)
Ity ny infographic, Pejy momba ny siansa ao ambadiky ny momba antsika.
Tags: aboutmomba anaymomba antsika fanao tsara indrindramomba ireo singa momba ny pejy anaymomba anay pejytsara indrindraMedia siegePejy momba ny siansa ao ambadiky ny momba antsikaVincent Nero
Ireo sakana enina mankany amin'ny Global manerantany amin'ny varotra e-varotrao
Drafitra ara-barotra amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny dingana 6